स्वर्गबासी चन्द्रमामा-(कथा) भुवन भट्टराई – Bihani Online
२६ श्रावण २०७७ २१:०७ August 10, 2020 bihani
तस्विरमा : भुवन भट्टराई (कथा लेखक)
कोहलपुर,बाॅंके,साउन,२६-चन्द्रमा-हामी बसेको यो ब्रह्माण्ड भन्दा ३,८४,४०० कि.मि को दुरिमा रहेको त्यो गोलो आकारको एक सुन्दर चम्किलो अनि चारै तिर साना गरि चम्किएका थोप्ला थोप्ला ले घेरिएर बिचमा बनेको मनमोहक त्यो चित्र कति राम्रो आहा !
यस पृथ्वीमा बस्ने प्राणी सबै त्यो चन्द्रमालाई हेर्दै मनमोहक हुनु स्वभाविक हो त्यो मनमोहक दृश्यलाई हेर्न दिनको त्यो चर्को घामको चिरेटो लाई सहदै रातको प्रतीक्षा गर्नु पर्ने जब त्यो घामको चर्को यातना पछिको त्यो सुन्दर आकृती दिनमा भोगेका सम्पुर्ण यातना बिर्साउछ । हेर्दा हेर्दै उ प्रती एक प्रकारको माया मोह बस्छ । जाउ उस्लाई भेटौ जस्तो लाग्छ , टिपेर आफ्नो दश औंलाको बिचमा राखी ओल्टाई पल्टाई खेलाउ जस्तो पनि लाग्छ उमेरले जुनसुकै वसन्त टेकेको भएपनी फेरि बालापनमै गएर रमाउन मन लाग्छ । आहा त्यो चन्दमा मेरो बालापनको “चन्द्रमामा” ।
बालापन छदा तिरको कुरा थियो जब दिन ढल्दै जान्थ्यो रात उदाउदै जान्थ्यो । एक छिन नरमाइलो जस्तो लाग्थ्यो जब मेरो चन्द्रमामा त्यो पहाड छिचोल्दै अलिकती अलिकती गरेर मलाई चिहाउदै त्यो पहाड बाट बाहिर निस्कनु हुन्थ्यो यस्तो लाग्थ्यो चन्द्रमामा मलाई लिन आउदै हुनुहुन्छ मेरो नजिकै आएर म संग कुरा गर्नु हुन्छ आहा कति रमाईलो हुन्थ्यो होला उहाको त्यो चम्किलो पन नजिकैबाट महसुस गर्न पाएको भए उहाँ म संग बोल्दिएको भए अझ उहाँ संगै जान पाएको भए । म पनि त्यो तातो धुप फाल्दै चम्किने सुर्यलाई उ त्यो पारिको डाडा बाट धकेली दिन्थे अनि म मेरो चन्द्रमामा संगै अर्को पहाड बाट बिस्तारै बाहिर निस्कन्थे अनि यो धर्तिमा कस्ले के के गरिरहेको छ म माथिबाटै नियालेर हेर्ने थियो ।
मेरो चन्द्रमामा संगै बसेर । मानिसका अनेकै सपना मध्यका यस्तो एक सपना बोलेको बालक म यो धर्तिको । तर म यो धर्तिमा बसेर यस्तै कल्पना गर्नु भन्दा त अरु कुनै उपाए पनि त छैन । यस्तै सोच्दै दिनलाई त्यो पश्चिमको पहाडबाट यी आखाले धकेल्दै त्यो पुर्वी पहाडमा मेरो चन्द्रमामा को प्रतीक्षा गरिरहन्थे । चन्दमामा आउनु हुन्थ्यो जानू हुन्थ्यो म एक्लै बोल्दै हुन्थे उहाँ चुपचाम मलाई हेरिरहनु हुन्थ्यो अनि फेरि त्यही सुर्यलाई पछ्याउँदै त्यही पश्चिमको पहाडमा लुक्नु हुन्थ्यो ।
सायद मैले उहालाई पछ्याउँदै थिए भने उहाले सुर्यलाई पछ्याउँदै हुनुन्थ्यो किनकि उहालाई मलाई मनपर्ने चम्किलो पन लिन सुर्यको आवश्यकता पर्थ्यो होला । सायद उहाहरुको पनि कुनै न कुनै सम्बन्ध छ होला र त दुबै जाना हामिभन्दा त्यति माथी गएर बस्नु भएको छ । तर म किन त्यहा जान सक्दिन किन म पनि उहाहरु जस्तै माथी बसेर यहाका मानिसहरु के गरिरहेका छन हेर्न किन सक्दिनहोला । अनि मेरो चन्द्रमामाको वरिपरि भएका ती सानासाना चम्किला बस्तु के होलाल के उहाहरु चन्द्रमामाको छोराछोरी हो ।
यदि हो भने म पनि अर्को जन्ममा मेरो चन्दमामाको सन्तान भएर उहाकै वरिपरि बसिरहन पाउ । सपनाको संसार भित्र रमाईरहेको त्यो बालक चन्द्रमामाको मा जाने बाटो खोजिगरिरहेको छ।एकदिन त त्यो चन्द्रमामा लाई भेटने अठोट लिएर बसेको छ।चन्द्रमाको चम्किलो रात अनि सुर्यको रापिलो दिन को भुमरिमा हराईरहेको एक बालक अनेकौ सपना बुन्दै त्यो मधुर आकाशलाई नियाल्दै बसेको छ ।
कुन दिनहोला त्यो चन्द्रमामाको घरमा म हुने बस यस्तै सोच्दै छ । तर यो ब्रह्माण्ड मा जन्म लिएकको एक प्रणिका लागि यो सपना एउटा सपना मात्र हुन्छ।यो ब्रह्माण्ड नै यस्तै बनेको छ यो ब्रह्माण्ड ले कसैको पनि सपना बुझ्दैन कसैको चाहानाको कदर नै गर्दैन । खाली धोका छलकपट, जालझेल, धोका र निराशा मात्रै दिएको हुन्छ कस्तो स्वार्थी यो पृथ्वी । सायद मेरो चन्द्रमामा को मा त्यस्तो छैन होला ।
त्यसैले त त्यहा चम्किने सबै बस्तु कति शान्त भएर सधै आफ्नै ठाउमा बसेर चम्किरहेका हुन्छन । कुनै कुनै बिस्तारै धिप धिप गर्दै आफ्नै ठाउमा बसेर एकाअर्का संग कुराकानी गरिरहेका हुन्छन । अनि कुनै कुनै लाई यो ब्रह्माण्डमा पनि आएर घुम्न मन लागेको हुन्छ होला र त कति हतार हतार गर्दै हामी तिरै आईरहेका हुन्छन तर यो स्वार्थी ब्रह्माण्ड ले त्यति राम्रो चम्किलो बस्तु किन देखि सहन्थ्यो होला नजिकै आउन नपाइदै बिचैमा नष्ट गरिदिन्छ ।
आखिर किन नमिलेका होलान यो ब्रह्माण्ड अनि मेरो चन्द्रमामा ? दुबै नजिकै हुने भए कति रमाईलो हुन्थ्यो होला । कहिले काहीँ भेट गर्न पाईन्थ्यो होला । यस्तै बिचार बोकेर हिडिरहेको थियो । जो कोहि संग पनि सुनाउदै हुन्थ्यो एकदिन म मेरो चन्द्रमामाको मा जान्छु अनि तिमिहरुलाई माथिबाट नियालेर हेर्छु । तिमिहरु त कतै बिलाउछौ होला सानो सानो देखिन्छौ होला चन्द्रमामाको छोराछोरी जस्तै । त्यही पनि म तिमिहरुलाई हेरेर कुरा गर्ने छु ।
यस्ता कुरा गर्दै हिड्थ्यो भेटेजती सबैलाई चकित पार्दै हिड्थो कतिलाई त यस्तो सम्म आश्वासन दिन्थ्यो कि चन्द्रमा मा जाने बाटो बनाउछु अनि मेरो पछि पछि तिमिहरु पनि आउनु संगै त्यो चन्द्रमा मा घुमेर फर्किनु पर्छ ।समय परिवर्तन हुँदै थियो समय अनुसार सबै कुरा परिवर्तन हुँदै थियो । बैज्ञानिक युग सुरुहुदै थियो यो ब्रह्माण्ड ले अब नया रुप लिदै थियो ।
अनौठा अनौठा आविष्कार हुन थालेका थिए सडक, गाडी, बिजुली, टेलीफोन आदि बिस्तारै हवाईजहाज पनि हजाईजहाज उडेको देख्दा उस्लाई लाग्छ थल्यो अब म मेरो चन्द्रमामाको मा जान सक्छु होला । तर हवाईजहाजमा चढेर फर्केका हरुले उस्लाई सुनाईदिन्थे यसमा बसेर चन्द्रमा पुग्न सकिँदैन भनेर । उस्मा केही निरासा देखिए पनि कोहि यो ब्रह्माण्ड मा रहेका घोकेबाझ बदमाश हरुले सुनाईदिन्थे हवाईजहाज बाट चन्द्रमा मा पुग्न सकिन्छ ।
त्यसपछी उस्को आशा शिखर त्यसै त्यसै उचालिएर चन्द्रमा नजिकै नजिकै पुग्थ्यो । निकै मेहनत गरि त्यो हवाईजहाज चढ्ने सपना देख्न थाल्यो र एकदिन जसो तसो हवाईजहाज चढ्यो तर त्यसरी पनि चन्द्रमामा पुग्ने सपना पूरा हुन सकेन । अब उस्को आशा निराशामा परिणत हुँदै गयो यो जुनिमा चन्द्रमामा को मा पुग्ने सपना अधुरो हुने पक्का भयो भन्दै अर्को जुनि को तपस्या गर्न थाल्यो ।
तर यो ब्रह्माण्ड मा बस्ने त्यस्ता राक्षस मानव जो बैज्ञानिक भनिन्थ्यो उनिहरुले यस्तो बस्तु निर्माण गरे जुन बस्तुको प्रयोग गरेर चन्द्रमा पुग्न सकिन्छ । त्यहा अवलोकन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कि निश्चित भयो । जब यो कुरा उस्को कानमा पुग्यो उस्को खुसिले यसपटक चद्रमाको स्पर्श सम्म गरिसक्यो । अब सपना साकार हुने भो म पनि मेरो चन्द्रमामा को मा पुग्ने भए यो धर्तिमा भएको सम्पुर्ण कुरा लाई म धेरै माथी बसेर नियाल्न पाउने भए ।
खुसिको सिमा नै रहेन सबैलाई म चन्दमा मा जान्छु भन्ने हल्ला गर्दै हिड्न थाल्यो । अनावश्यक खुसी फिजाउदै रमाउन लाग्यो यस्तै लाग्दै थियो कि उ यति बेला चन्द्रमा मा पुगि सकेको छ । यसै बिच चन्द्रमा को पहिलो यात्रा तय गर्ने कुरा निश्चित भयो पहिले को जाने भन्ने कुरा व्यापक रुपमा फैलियो ।
अब उ चन्द्रमा मा जाने सपना मस्त थियो त्यतिकैमा उस्लाई केही मान्छे हरु एउटा खबर लिएर आए बाबू के तिमी चन्द्रमा मा जान चाहान्छौ ? चाहान्छौ भने हिड हामी पहिलो चन्द्रमा यात्राको तयारी मा छौ । उस्को खुसिको सिमानै रहेन केही नसोची उ यात्रा तिर लम्कियो उस्लाई यो कुरा दिमाग मै आएन कि म फर्किन सक्दिनहोला म फर्किन भने मेरो परिवार के होला उस्को एउटामात्र चाहाना थियो कि चन्द्रमामा को मा जानू छ । अन्तत उस्को चन्द्रमा यात्रा उस्को सपनाको यात्रा सुरु भयो उ चन्द्रमाको यात्रा प्रस्थान गर्‍यो ।
यात्रा मा कुनै पनि बाधा थिएन तर उ जति अगाडि बढ्दै थियो कतै मानिस रोई रहेको कराई रहेको हारगुहार गरे जस्तो अनुभवले उस्लाई छुदै जान्थ्यो यो के हो उस्ले पत्तोइ पाउन भने सकेन । उस्ले सोच्न थाल्यो ब्रह्माण्ड मा भन्दा यो चन्दमामा अझ धेरै बाधा, दुख, छल कपट छ कि जस्तो तर उ जति जति चन्द्रमा को नजिकै पुग्दै थियो उस्ले सोचेको भन्दा धेरै फरक आकृती उस्को आखाको नजिक नजिक हुदौ थियो उस्ले ब्रह्माण्ड बाट नियालेको चन्द्रमा र नजिकै पुग्दै गर्दाको चन्द्रमा धेरै फरक देखिदै थियो ।
सोचेको भन्दा फरक अझै राम्रो । बादल भित्र सुन्दर बस्ती जस्तो ठुला ठुला जिउ गरेका मान्छे जस्ता के होलान उ आश्चर्य पर्न थाल्यो । उ नजिकिदै थियो चारै तिर चम्किलो सुन्दर बस्तिनै बस्ती जिउभरी गरगहनाले धपक्क बलेका मान्छे हरु त्यो देख्दा उस्लाई लाग्यो चन्द्रमामाका पनि सन्तान त रैछन नि आखिर मैले पृथ्वी बाट देखेको कुरा साचो रहेछ । उसले फेरि पृथ्वी बाट टाउको उठाएर चन्द्रमा लाई हेरेको जस्तै हेर्ने कोसिअ गर्छ ।
अचम्म उस्ले फेरि अर्को चन्द्रमा उत्तिनै माथी देख्छ । उस्लाई एकछिन आफ्नो सपना टुटेको जस्तो लाग्छ म कहाँ छु के यो चन्द्रमा होईन यदि यो चन्द्रमा हो भने त्यो माथी देखिने के हो त? उस्को मनमा प्रश्नको भण्डार उत्पन्न हुन्छन उस्को आखामा एकछिन अन्धकार छाउछ । फेरि उस्ले पुन आफू आएकै बाटो भएर फर्किने निर्णय लिन्छ र फर्कन खोज्छ । तर केही ठुला जिउ भएका मानिसहरु उस्लाई स्वागत गर्न भनी आउछन । उस्लाई यो चन्द्रमा नै हो भनी विश्वास दिलाउछन र भव्य स्वागत गरि भित्र लैजान्छन । जति भित्र जान्छ उतिनै सुन्दर दृश्य अनि उतिनै सुन्दर मानिस हरु । उस्लाई अचम्म लाग्छ यो मान्छे हरु हाम्रो पृथ्वी तिर भ्रमण गर्न कहिल्यै जादैन्न होला ।
गएको भए कहिले काहीँ देख्नु पर्ने यति सुन्दर मान्छे हरु उता पनि कहिल्यै देखिन टोलाउदै सबैतिरको सुन्दरता मा मख्ख पर्छ । त्यतिकै मा एकजना लाई उस्ले प्रश्न गर्न सम्म भ्याउछ ! तपाईं हाम्रो पृथ्वी मा भ्रमण गर्न जानू भएको छ ? जवाफमा उस्ले भन्छ म पनि पृथ्वी बाट नै आएको छु बाबू धेरै पहिले त्यहा भन्दा यहाँ धेरै सुन्दरता छ यहाँ आएपछि मलाई फर्किन मन लागेन त्यसैले अब सधैको लागि यतै बस्ने बिचार गरेको छु बाबु । तपाईलाई पृथ्वी को याद आउदैन त ? आउँछ बाबू नजिकै त छ याद आयो भने यसरी हेर्छु भन्दै जमिन तिर देखाउछ ।
साच्चै पृथ्वी त जमिन मुनि नजिकै रहेछ आफुले चाहेको ठाउँ सजिलै नियाल्न मिल्ने रहेछ । अब उ दङ्ग पर्न थाल्यो यहाँ बस्दा पृथ्वी पनि हेर्न पाईने यति यो यस्तो सुन्दर वातावरण अब उस्ले पनि नफर्किने भनी मनमनै सोच्न थाल्यो । यात्रा अगाडि बढ्दै थियो झन भन्दा झन सुन्दर दृश्य ले उस्को मन प्रशन्न बनाउदै थियो । अलि पर केही मानिस हरुको भिड देख्यो निकै रमाईलो भिड उस्ले नजिकै गएर नियाल्ने बिचार गर्‍यो त्यति रमाईलो देखिने वातावरण उस्ले पृथ्वी मा कहिल्यै देखेको थिएन ।
उ नजिक नजिक गयो जति नजिकै जाँदै थियो उ त्यति आश्चर्य हुँदै थियो किनकी उस्ले चिनेका मानिसहरु उस्के नजर भित्र पर्दै थिए । अब त उस्ले राम्रो संग चिनिसक्यो कि उस्ले केही वर्षा अगाडिमात्र गुमाएको आफुलाई निकै माया गर्ने हजुरबुबा लाई । उस्ले बोलाउन खोज्यो तर सकेन । तर हजुबुबाले नै उस्लाई अंगमाल गर्नु भयो तर हजुरबुबा निकै खुसी देखिनु हुन्थ्यो । उ एक छिन अचेत भयो । जब उस्लाई होस आयो उस्ले पृथ्वी बाट गुमाएर सम्पुर्ण आफ्ना पृय मान्छे लाई एकाएक आफ्नो आँखा आगाडी पाउन थाल्यो । उस्को सम्पुर्ण परिवार नै जम्मा भएको जस्तो वातावरण भयो ।
सबैले उस्लाई यहि बस्नु पर्छ भनेर अनुरोध गर्न थाले उस्ले त्यो वातावरण लाई नकार्न सकेन र त्यही बस्ने निर्णय लियो र बाचा गर्‍यो कि म पृथ्वी मा कहिल्यै फर्किने छैन । तर उस्लाई एउटा कुरा कहिल्यै पनि थाहा हुन सकेन कि उस्को पृथ्वी बाट यात्रा सुरु हुदाको दिन उ यात्राको खुसिलाई सम्हालिन नसकी हिडदा पृथ्वी मै उस्लाई यात्राको खबर गर्न आउने मान्छे भन्दा केहि बेर अगाडिमात्र कारण बस मृत्यु भाईसकेको थियो त्यो दिन उ रकेट चढेर चन्द्रमा होईन बहान चढेर स्वर्गलोकको यात्रा प्रस्थान गरेको थियो ।।
यो कथा लेखी सक्दा राती को १:०६ मिनेट गएको छ । कथा लेखी सके पछि मैले एकछिन आफैलाई सोचे कि म पागल त भईन म यो के लेख्दै छु । के मैले यो लेख्नै पर्ने कुरा लेखेको हो त? किन मेरो मनमा यस्तो कुरा आयो । यो कथा लेखिसकेपछी मैले एकपटक पनि पढ्ने कोसिस गरेको छैन । कृपया कहि कतै गल्ती भएको होला सच्याउने मौका दिनुहोला । तपाईहरुको प्रतिक्रिया सुन्न लाई एकदमै आशाबादी भएर बसेको छु । ०१:११ am | धन्यवाद ।
विप्लवसँग सरकारको तीनबुँदे सहमति : शुक्रबार प्रम ओली र विप्लवले सम्बोधन गर्ने
भीम रावलले आज राजीनामा फिर्ता लिने
एकैदिन २१२० जनामा कोरोना संक्रमण,८ को मृत्यु,२०४४ जना डिस्चार्ज
थप ३३८ जना कोरोना संक्रमित थपिए: मृतकको संख्या ७९ पुग्यो